Mozilla Firefox | November 2019
အဓိက Mozilla Firefox
Mozilla Firefox ရဲ့များအတွက် Flash ကို Video Downloader နှင့်အတူဗီဒီယိုများ Download
အင်တာနက်ကိုတွင်, နေ့တိုင်းအကြှနျုပျတို့သညျကိုသင့်ကွန်ပျူတာကိုကယ်တင်ချင်သောမီဒီယာအကြောင်းအရာကြီးမားတဲ့ပမာဏ, ဖြည့်ဆည်း။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, အ Mozilla Firefox browser ကိုများအတွက်အထူး tools တွေကိုဒီတာဝန်ထွက်သယ်ဆောင်ရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ အဲဒီကိရိယာတစ်ခုမှာ Flash ကို Video Downloader ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျကိုသာအွန်လိုင်း website တစ်ခုအပေါ်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်ထားတဲ့သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုမှဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါဖို့လိုအပ်လျှင်, ဤပြဿနာကိုအထူး browser ကို add-ons တွေကို browser ကို Mozilla Firefox ကိုမြှင့်တင်ရန်ကြောင့်အကောင်အထည်ဖေါ်ခွင့်ပြုပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ Classic Theme ပြန်သုံးပြီးအဟောင်း interface ကို Mozilla Firefox ကိုပြန်သွား
အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ထို Mozilla Firefox browser ကို developer များဟာလုပ်ဆောင်ချက်ကိုနှင့်လုံခြုံရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်ရေးမှာသာရည်ရွယ်, updates များကိုလွှတ်ပေးရန်, ဒါပေမယ့်လည်း interface ကိုပြောင်းလဲမှုကိုဖြည့်စွက်ရန်။ ဒါကြောင့်, Mozilla Firefox ကိုသုံးစွဲသူများသည်, ထို browser ၏ 29 ဗားရှင်းနဲ့စတင်ပြီး, အင်တာဖေ့အတွက်အတွေ့အကြုံရှိအဓိကအပြောင်းအလဲအားလုံးစိတ်ကျေနပ်မှုမရပါ။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကို၏စင်ကြယ်
သင့် browser ရှင်းလင်းရေး - သင်က Mozilla Firefox browser ကို၏လုပျငနျး, ဖြေရှင်းချက်ဖို့အလွယ်ကူဆုံးနှင့်အများဆုံးတတ်နိုင်လမ်းနှင့်အတူပြဿနာများရှိပါက။ ဤဆောင်းပါး၌ကျွန်တော် Mozilla Firefox ကို web browser ကိုတစ်ဦးရှုပ်ထွေးသောသန့်စင်ဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လောက်အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်ရန်အတွက် browser ကို muff ရှင်းလင်းဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်, ဥပမာ, တစ်ဦးရိုက်နှက်မှုစွမ်းဆောင်ရည်လျှင်, ဆိုလိုသည်မှာ၎င်း၏ရှုပ်ထွေးသောထွက်သယ်ဆောင်ရန်အရေးကြီးပါသည်။
Mozilla က Firefox မှာ mode ကိုရုပ်ဖျက်ဖွင်
မျိုးစုံသည်အသုံးပြုသူများနှင့်အတူ Mozilla Firefox browser ကိုလျှင်, ဤအခြေအနေမျိုးတွင်, သင်သည်သင်၏ browsing history ဖုံးကွယ်ဖို့လိုအပ်လိမ့်မည်။ Mozilla က Firefox မှာထိရောက်သောရုပ်ဖျက်ပေးပါသည်သည့်အခါတစ်ဦးချင်းစီအတွက်သမိုင်းဖိုင်တွေရှင်းလင်းဖို့ကို web များနှင့်အခြားစုဆောင်း browser ကိုရယူရန်ပြီးနောက်ကံကောင်းထောက်မစွာ, သင်သေချာပေါက်မကျင့်။
Mozilla Firefox ရဲ့အတွင်းသမိုင်းကိုရှင်းလင်းဖို့ကိုဘယ်လို
သီးခြားဂျာနယ်ထဲမှာသိမ်းထားတဲ့သောသမိုင်း, browsing တိုင်း browser ကိုစတိုးဆိုင်များ။ ဤသည်အသုံးဝင်သော feature ကိုသငျသညျအစဉျအမွဲသွားရောက်ခဲ့ပြီးတော့ဆိုက်ဖို့အတွက်ပြန်သွားဖို့မည်သည့်အချိန်တွင်မခွင့်ပြုပါတယ်။ ဒါပေမယ့်ရုတ်တရက်လျှင်သင်ကြှနျုပျတို့သညျဤအောင်မြင်နိုင်ပုံကိုကြည့်ရှုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော, Mozilla Firefox ရဲ့သမိုင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြသည်။
Mozilla က Firefox မှာ cookies များကိုဖွင့်ဖို့ဘယ်လို
ဘရောက်ဇာကို Mozilla Firefox ကိုအတူလုပ်ကိုင်သည့်အခါ, တစ်ဦးကို web browser ကိုက်ဘ် surfing ၏ဖြစ်စဉ်ကိုရိုးရှင်းဖို့အသုံးပြုသူများအဖွကြောင်းလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်ကို detect ။ ဥပမာ, Browser ကို cookie ကိုမှတ်တမ်းတင် - သငျ site ပေါ်တွင်တစ်ဦးက Web သယံဇာတခွင့်ပြုချက်မှ login တဲ့အခါမှာဖျော်ဖြေဖို့မဖြစ်နိုင်သောကြောင့်သတင်းအချက်အလက်။ သငျသညျခွင့်ပြုချက်လုပ်ဆောင်ရန်ရှိသည်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်ကွန်ရက်စာမျက်နှာအကူးအပြောင်းတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်ဆိုပါကဆိုလိုသည်မှာ, Mozilla က Firefox မှာ cookies များကိုဖွင့်ပေးခြင်း။
Mozilla Firefox ကိုသင့်ရဲ့ default အဘရောက်ဇာကိုအောင်လုပ်နည်း
Mozilla Firefox ရဲ့ - သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဓိက Web browser ကိုဖြစ်လာရန်ထိုက်တဲ့အကြီးအယုံကြည်စိတ်ချရသောဘရောက်ဇာ။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, က Windows မှာရှိတဲ့ default browser ကို faerfoks လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများစွာပေးပါသည်။ Mozilla Firefox ကိုကို default program ကိုဖန်ဆင်းတော်မူပြီးမှ, ဝဘ်ဘရောက်ဇာကိုသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အဓိက browser ကိုဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကို setting Hidden
Mozilla Firefox ရဲ့သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုများအတွက် web browser ကို၏လုပျငနျး-ညှိဒဏျကွေးဖို့ခွင့်ပြုကြောင်းမြင့်မားသောလုပ်ဆောင်ချက်ကိုဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်။ သို့သျောလညျးအနညျးငယျကလူ Mozilla Firefox ကိုစိတ်ကြိုက်ဘို့ ပို. ပင်အခွင့်အလမ်းများကိုထောက်ပံ့ပေးသောဝှက်ထားသောအပြင်အဆင်များနှင့်အတူအပိုင်းရှိပြီးကြောင်းကိုငါသိ၏။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုများအတွက် QuickTime plugin ကို
အဆိုပါ QuickTime - အထူးသဖြင့်, လူကြိုက်များအသံနှင့်ဗီဒီယိုကို formats ကစားရန်ဒီဇိုင်းကို Apple ကနာမည်ကျော်မီဒီယာပလေယာ - Apple ကကို formats ။ Mozilla Firefox ကို, အထူး QuickTime plugin ကိုမီဒီယာဖိုင်တွေရဲ့ချောမွေ့ပြန်ဖွင်သေချာစေရန်အလို့ငှာ။ အားလုံးကတော့ Apple ကထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများအညီအမျှကောင်းသောဖြစ်ကြသည်။
Mozilla Firefox ရဲ့များအတွက် VLC Plugin ကို
သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ TV ကိုကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်နိုင်ရန်အတွက်, သင် VLC Plugin ကို install လုပ် plugin ကိုအတူကအွန်လိုင်း IPTV ကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသည်အဘယ်မှာရှိ website တစ်ခုအဖြစ် Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုသွားကြဖို့လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။ VLC Plugin ကို - အထူး plug-in ကိုနာမည်ကျော်မီဒီယာပလေယာ VLC ၏ developer များကအကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် Mozilla Firefox browser ကိုများအတွက်။
Mozilla က Firefox မှာဂီတကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်ဖြည့်စွက်
Mozilla Firefox browser ကို - တစ်အစွမ်းထက် web browser ကို, ဝက်ဘ်စာမျက်နှာများနှင့်၎င်း၏ contents တွေကိုတစ်တည်ငြိမ် display ကိုပေးလိမ့်မည်ဖြစ်သည်။ သင်အွန်လိုင်းဂီတကစားနိုင်ပါတယ်ဆို site ပေါ်တွင်လျှင်မည်သို့ပင်ဆို, ထို့နောက်ဘရောက်ဇာကိုနည်းလမ်းဖို့ firmware ကိုဖိုင်ကို download လုပ်ပါအောင်မြင်မည်မဟုတ်။ အထူးဖြည့်စွက်ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်၏အကူအညီရှာရှိပါတယ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
မြန်နှုန်း Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ Dial: ညွှန်ကြားချက် Apply
Visual bookmarks ကို - သင့်သည်ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်. က်ဘ်စာမျက်နှာများကိုအလျင်အမြန် access ကိုရရန်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်းများထဲမှတစ်ခု။ ဒီဧရိယာထဲမှာလူကြိုက်အများဆုံးနှင့် functional extension ကိုမြန်နှုန်း Mazilu များအတွက် Dial ဖြစ်ပါတယ်။ Speed ​​Dial - Mozilla Firefox ရဲ့အဖြစ်အဘို့ဖြည့်စွက်ပါကအမြင်အာရုံ tabs များနှင့်အတူစာမျက်နှာဖြစ်ပါသည်။
Mozilla Firefox ရဲ့ browser ကနေစကားဝှက်တွေကိုတင်ပို့ဖို့ကိုဘယ်လို
သင် Mozilla Firefox browser ကိုတစ်ပုံမှန်အသုံးပြုသူတွေဟာလျှင်, အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှသငျသညျဥပမာမှတင်ပို့ဖို့လိုအပ်မည်အကြောင်း, passwords များကိုများ၏အတော်လေးကျယ်ပြန်စာရင်းကိုစုဆောင်းရန်များပါတယ်, တစ်ဦးကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာပေါ်မှာ Mozilla က Firefox မှာရွှေ့သို့မဟုတ်သိုလှောင်ထားခံရဖို့ password များ၏ဖိုင်ထဲမှာ storage ကိုစီစဉ်ဖို့ သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်မည်သည့်ဘေးကင်းလုံခြုံရာအရပျ၌တည်၏။
Mozilla Firefox ကိုလုပ်ဖို့ဘာ CPU ကိုသက်ရောက်?
Mozilla Firefox ကိုပင်အလွန်နိမ့်ဆုံးကိုစက်ပေါ်တစ်ဦးအဆင်ပြေ surfing ဝဘ်ပေးနိုငျကွောငျးအများဆုံးကုန်ကျစရိတ်-ထိရောက်သော browser ကိုစဉ်းစားသည်။ သို့သော်အသုံးပြုသူများကို Firefox ကိုအဆိုပါ CPU ကိုသက်ရောက်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနှင့်အတူကိုင်တွယ်နိုင်ပါတယ်။ ယနေ့ဤပြဿနာတွင်နှင့်ဆွေးနွေးတင်ပြပါလိမ့်မယ်။ Mozilla Firefox ရဲ့အချက်အလက်များ၏ဒေါင်းလုဒ်နှင့်အပြောင်းအလဲနဲ့အဆိုပါ CPU ကိုဝန်နှင့်မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာပေါ်လာတဲ့ကွန်ပျူတာများ၏အရင်းအမြစ်များအပေါ်လေးနက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးချီးမွမ်းစေခြင်းငှါအခါ။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုများအတွက်စကားပြန်
Runet ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနေသော်လည်းအများစုမှာစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာနေဆဲနိုင်ငံခြားအရင်းအမြစ်များအပေါ်ထားရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်ကဘာသာစကားမသိကြသလော အကယ်လို့ Mozilla Firefox ကိုများအတွက်ရရှိနိုင်ဘာသာပြန်များတဦးကိုထည့်သွင်းမယ်ဆိုရင်ဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ Mozilla Firefox ရဲ့များအတွက်စကားပြန် - အပြည့်အဝအဟောင်းကို Format ကိုထိန်းသိမ်းနေချိန်တွင်, တစ်ဦးချင်းစီကိုအပိုင်းပိုင်းသို့မဟုတ်တစ်ခုလုံးကိုစာမျက်နှာအဖြစ်ဘာသာပြန်ဆိုရန်ခွင့်ပြုသည်အရာကို built-in browser ကိုအထူးဖြည့်စွက်, ဖြစ်ကြသည်။
Mozilla Firefox ကိုအဘို့အ Ghostery: အင်တာနက်က bug တွေဆန့်ကျင်တိုက်ခိုက်နေ
က World Wide Web ကိုမှကြွလာသောအခါ, အမည်မသိဆက်လက်ရှိနေရန်ခက်ခဲသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်အပါအဝင်အသုံးပြုသူများသည်အကြောင်းကိုအားလုံးလိုအပ်သောအချက်အလက်များစုဆောင်း, ဆိုက်အဘယ်သူမျှမကအထူး bug တွေအဘယ်အရာကိုသွားရောက်ကြည့်ရှုခဲ့ကြလိမ့်မယ်: Viewed အွန်လိုင်းစတိုးကနေကုန်ပစ္စည်းများ, လိင်, အသက်, တည်နေရာ, browsing history, etc သို့သော်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်မဟုတ်: အ Mozilla Firefox browser ကိုနှင့် Ghostery add-ons တွေကို၏အကူအညီဖြင့်သင်တို့ကိုအမည်မသိဆက်လက်တည်ရှိနိုင်ပါ။
ဆေးတစ်လက်မှားယွင်းနေသည် Mozilla က Firefox မှာအဆိုပါ Mozilla က Runtime ကိုရှာမတွေ့ပါ
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်မဆိုအစီအစဉ်၏စစ်ဆင်ရေးအတွင်းသင် tool ကိုသုံးပြီးဆက်လက်ခွင့်ပြုမအမှားအယွင်းများအမျိုးမျိုးတွေ့ကြုံခံစားစေနိုင်သည်။ အထူးသဖြင့်, ဤဆောင်းပါးကိုမှားယွင်းနေသည်အဆိုပါ Mozilla က Runtime ကိုရှာပါမနိုင်ဆွေးနွေးကြမည်, အသုံးပြုသူများ Mozilla Firefox browser ကိုကြုံတွေ့ရ။ Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုဖွင့်ချိန်မှာကွန်ပျူတာအလုပ်အမှုဆောင် Firefox ကိုဖိုင်ကို program ကို run နေတာဝန်ရှိသည်သောမတွေ့ရှိခဲ့အသုံးပြုသူကိုပြောတယ်နှင့်အတူမှားယွင်းနေသည်အဆိုပါ Mozilla က Runtime ရှာမတွေ့ပါ။
ဂျာဗား Mozilla က Firefox မှာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး: ပြဿနာများ၏အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ
ယနေ့ဂျာဗား - မဟုတ်လူကြိုက်အများဆုံး plug-in ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရှိ Java-အကြောင်းအရာမှန်ကန်သော display ကိုလိုအပ်သော Mozilla Firefox browser ကို, (လမ်းဖြင့်နီးပါးသွားကြောင်းဖြစ်သော) သည်။ ဂျာဗား Mozilla က Firefox မှာအလုပ်မလုပ်သောအခါဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ကျနော်တို့ပြဿနာကိုအာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဂျာဗား plugins ကိုနှင့်ကို Adobe Flash Player ကို - Mozilla Firefox ရဲ့အဖြစ်အများဆုံးပြဿနာ plugins ကို, မကြာခဏ browser မှာ operate ဖို့ငြင်းဆန်။
Mozilla ရဲ့ Firefox browser ကိုများအတွက် Savefrom.net
သငျသညျအစဉျအမွဲပြန်ဖွင့်မှသာအွန်လိုင်းရရှိနိုင်ပါသည်ရှိရာရေပန်းစားသော web အရင်းအမြစ်ကနေအသံသို့မဟုတ်ဗီဒီယိုကို download လုပ်ပါဖို့လိုရှိခဲ့သလဲ ဟုတ်ကဲ့လျှင်, အကယ်စင်စစ်သင်သည်ထို Mozilla Firefox browser ကိုများအတွက် Savefrom.net extension ကိုတန်ဖိုးထားနိုင်ပါလိမ့်မည်။ FaceBook, Youtube, Odnoklassniki, Instagram ကို, Vimeo နှင့်အခြားသော: Savefom.net သင်ရေပန်းစားသော web အရင်းအမြစ်များကိုကနေအသံနှင့်ဗီဒီယိုဖိုင်များကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ခွင့်ပြုမယ့် browser ကို-based extension တခုဖြစ်တယ်။
NoScript အား: Mozilla က Firefox မှာအပိုလုံခြုံရေး
https://termotools.com my.termotools.com © Mozilla Firefox 2019